Congress-ka Oo Maanta Sugaya Go’aanka Warbixin Halis Ah Oo Ay shaacinteeda Ku Sandulleeyeen Madaxweyne Obama | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Congress-ka Oo Maanta Sugaya Go’aanka Warbixin Halis Ah Oo Ay shaacinteeda Ku Sandulleeyeen Madaxweyne Obama
Congress-ka Oo Dabada Ka Riixaya Warbixin Ka Kooban 28 Bog Oo Ku Saabsan Dhacdadii 9/11 + Boqortooyada Sucuudiga Oo Indho Qudhaanjo Ku Eegeysa New York (Hubaal) Golaha Senators-ka ee dalka Maraykanka ayaa Madaxweyne Brack Obama ka sugaya maanta in uu ka go’aan qaato shaacinta warbixin fallaadh ku ah boqortooyada Sacuudiga, taasi oo ku saabsan dhacdadii ay saddexda kun ee qof ku naf waayeen ee 11-kii sep. 2001-kii lagu qarxiyey Twin Towers-kii New York. Weriye ka tirsan telefishanka Maraykanka ee CNN-ta loo yaqaanno isla markaana qaabilsan arrimaha xidhiidhka caalamiga ah ayaa xalay barnaamij uu ka sii daayay TV-gaas waxaa uu ku sheegay in maanta oo jimce ah uu kongereska Maraykanku ka sugayo Madaxweyne Obama inuu shaaciyo qoddobada ay ka kooban tahay warbixintan 28-ka bog ahi, taasoo xambaarsan dhikumentiyadii ku lug lahaa dhacdadii xarunta ganacsiga adduunka ee ku taallay magaaladda New York ee dalka Maraykanka.
Warbixintan oo qaybo kamid ah uu wargeyska HUBAAL idiin soo turjumay waxaa uu weriyuhu ku soo qaatay Sumcad xumo uu sheegay in ay ka dhan tahay Sucuudiga oo lagu ogaaday baadhitaan 2002-dii koongareeska Maraykanku ka sameeyay weerarkii 9/11.
“sarkaal Aqalka Cad ka tirsan ayaa u sheegay shabakadda oo yidhi; “tani waa dukumenti Kongareeska , taas oo ugu dambeyn aanu filayno in uu sii dayn doono Hill marka agaasimaha Sirdoonka Qaranka uu dib u eegis ku sameeyo”.
Inta badan macluumaadka ku jira 28-ka bog ayaa durba si aamusnaan ah ay xukuumaddu u soo saartay xagaagii la soo dhaafay, sida faylka 17aad ee kaydka waraaqaha FBI ee la xidhiidha dhacdadii 9/11.
Warbixinta koowaad waxa sheegay shabakadda 28pages.org liiska file-kan oo ku taxan qaar ka mid ah saddex iyo toban qof oo xidhiidh la lahaa burcad badeedda qaybta u madaxa. Guud mar kooban oo macquul ah oo dawladda Sucuudiga ku xidhiidhiyay ku lug lahaanshaha weerradii 9/11 lagu qaaday daarahii Twin towers-ka ee New York.
Rep . Adam Schiff , oo xubin ka ah Guddiga mukhaadaraadka ee Intelligence , ayaa sheegay in warbixinta la soo gelin lahaa baahinta internet-ka on line-ka ugu dhakhsaha badan.
“Gudiga arimaha mukhaadaraadka (House Intelligence Committee) waxa uu warbixinta oo dhamaystiran, dhan qoraal iyo dhan eegisba lasoo saari doonaa maanta (Shalay) ilaa Berri oo noqonaysa Jimcaha Maanta, markaas ayaa aqalka sare iyo guddidu ay aqalka odayaasha u siin doonaan fasaxa ah inay hore usii wadaan warbixinta ay hore usoo saareen guddidu.” Sidaa waxa u CNN u sheegay Schif oo xubin ka ah guddida arimaha sirdoonka.
Toddobaadkii ina dhaafay ayaa waxa mudanayaasha baarlamaanka ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ay ugu baaqeen aqalka cad inuu caddeeyo oo ay ku faafiyaan bogagga, soona bandhigaan sharci ah inay sidaasi sameeyaan, haddii aanu madaxweynuhu u dhaqmayn.
“haddii maamulka madaxweyne Obama aanu tallaabo hore u socon, waxaanu u baahan nahay inaanu usii dayno sharciga oo ah in guddida sirdoonka loo fasaxo inay daabacaan bogagga” sidaasi waxa yidhi xildhibaan Stephen Lynch oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, lagana soo doortay Massachusetts.
Dawladda Sucuudiga ayaa dhankeeda waxay ku baaqday in bogagga macluumaadkan lagu siidaayay, aanay waxba ka qaban Karin wax kasta oo lagu eedeeyay, taasi oo ay muddo dheer beeninayeen.